Sifeeyaha Hawada Smartmi, nadiifiye aad u karti badan leh filtarrada H13 | Warka Gadget
Nadiifinta hawadu waxay noqotay walaac casri ah laakiin aan ka muhiimsanayn, halkan waxaan ku falanqeynay nadiifiyeyaal badan taas oo naga caawinaysa inaan gurigeena u ilaalino sida ugu macquulsan oo aan xasaasiyad lahayn, waa wax la mahadiyo wakhtiyadan. Summada-hoosaadka Xiaomi oo muddo dheer nala jirtay ayaa laga waayay liiskayaga falanqaynta.
Waxaan falanqeyneynaa Sifeeyaha Hawada cusub ee Smartmi, nadiifiyaha hawada oo dhameystiran naqshadeynta iyo shaqeynta leh filtarrada H13 oo ballanqaadaya waxqabad weyn. Waxaan eegi doonaa alaabtan oo ah mid dhexdhexaad ah qiimaha marka loo eego noocyada kala duwan ee qalabkan si aan u aragno inay runtii u qalmaan iyo in kale.
1 Nakhshad iyo qalab: iftiin laakiin dib u habeyn cajiib ah
3 Awoodda nadiifinta
Nakhshad iyo qalab: iftiin laakiin dib u habeyn cajiib ah
Sidaad si fiican u ogtahay, badeecadii hore ee Smartmi ee cabbirkan iyo baaxadan waxay ahayd gabi ahaanba laba jibaaran, oo geeso wareegsan leh, haa, laakiin aad uga fog naqshadda ay bixiso Smartmi Air Sifeeyaha. Si kastaba ha ahaatee, palette midabka dhaqameed waa la ilaaliyaa, tusaale ahaan. Iyadoo ay taasi jirto, caag cad oo matt ah ayaa loo hayaa sida qaybta ugu muhiimsan ee dhismaha, oo ay weheliso naqshad gebi ahaanba cylindrical taas oo ka dhigaysa inay u muuqato mid cufan iyo, dhammaan ka sarreeya, si fiican uga shaqeeyay dhammaan dhinacyada.
Cabirrada: 266 x 265 x 535 mm
Miisaanka: 5,2 Kg
Ma ka heshay? Waxaad ka iibsan kartaa qiimaha ugu fiican Amazon
Waa lama huraan waxay ina xusuusinaysaa i3000, nadiifiyaha Philips oo si ficil ahaan isku mid ah, labadaba naqshadeynta iyo xaqiiqda ah in guddiga LED-ku uu ku yaal aagga sare waana midka noo ogolaanaya inaan si buuxda u hagaajinno xuduudaha hawada sifeeyaha. Buug-gacmeedka. Isbarbardhigga waa nacayb, haa, laakiin marka aan falanqeyno badeecadaha kala duwanaansho gaar ah ma lihin wax kale oo aan ka ahayn inaan sidoo kale xusno kuwa ay aadka isugu dhow yihiin. Guud ahaan, sida dhammaan alaabooyinka astaanta-hoosaadka Xiaomi, waxaan la kulannaa qalab si wanaagsan loo dhammeeyey oo u roon isha iyo taabashada.
Sifeeyaha hawada ee Smartmi wuxuu leeyahay sidii uusan ku ahaan karin isku xirnaanta WiFi iyo tan Waxay noo ogolaataa inaan ku xakameyno nadiifiyaha iyada oo loo marayo codsiga Xiaomi Mi Home ee loo heli karo iOS iyo Android, Sidoo kale isku-dubbarididda kaaliyeyaasha farsamada ee ugu muhiimsan, waxaan si cad uga hadlaynaa Amazon Alexa iyo Google Assistant, sidaas maaha Siri ama kuwa laga soo qaatay Apple HomeKit, in kasta oo alaabada kale ee Xiaomi ay leeyihiin is-dhexgalkaas. Marka lagu daro tan iyo kan gacanta laftiisa, waxaan haysanaa qaab «AUTO» kaas oo sameeya hagaajin caqli gal ah xawaaraha nadiifinta iyadoo loo eegayo dareemayaasha kala duwan ee lagu habeeyay dhabarka Sifeeyaha Hawada ee Smartmi, qaabka aan inta badan ku talinayaa. .
Waxaan sidoo kale haysanaa hawo-qaadis heerar badan ah, isagoo ah in qaabka sanqadh hooseeya uu bixiyo ilaa 19 dB, oo ku filan in la maqlo taageeraha laakiin maaha in uu keeno buuq inta lagu jiro maalinta. Habeenkii waxaan leenahay «habka habeenka» kaas oo si weyn u xaddidaya xawaarahaas oo hagaajiya nasashada.
Si la mid ah, si aan ula falgalno qalabka aan ka faa'iideysan karno ama shaashadeeda taabashada, ama habka gesturelka iyada oo loo marayo dareemayaal u dhow taas oo noo ogolaan doonta in aan fulino hagaajinta ugu muhiimsan iyada oo aan la taaban guddiga taabashada ee aagga sare. Isdhexgalkayaga nidaamka dhaqdhaqaaqa ma ahayn mid aad u wanaagsan, waxaan dhihi lahaa waxaan doorbidayaa hagaajinta codsiga ama si toos ah taabashada shaashadda.
Halkan ayuu ku sifeeyaa hawada Smartmi inta soo hadhay. Si aan u bilowno, waxaanu haynaa shaandhada HEPA H13 kaas oo awood u leh inuu nuugo ur xun, qiiqa, qaybaha TVOC (sida alaabta nadiifinta) iyo dabcan manka. Guddiga waxaan awood u yeelan doonaa inaan helno macluumaadka ku saabsan PM2.5 ee aan ku hayno hawada iyo tusiyaha heerka TVOC, marka lagu daro tilmaame kale oo ah habka hawlgalka, heerkulka iyo dabcan tusaha qoyaanka ee ku yaal goobta sifeeyaha hawada.
Marka la eego shuruudahan iyo ka faa'iidaysiga laba dareeme "caqli" ah, waxaan ogaanay iyadoo la isticmaalayo qiyaastii laba iyo toban hawo nadiifin saacaddii, qalabkani waa mid aragti ahaan awood u leh inuu nadiifiyo agagaarka 15 mitir oo laba jibbaaran shan daqiiqo gudahood, markaa kan gaar ahaan waxaa lagula talinayaa in la labanlaabo. qolal ama qolal yar oo fadhiga, sinaba qolal waaweyn oo dhammaystiran ama waddooyin. Si kastaba ha ahaatee, shaandhaynta kaarboonka firfircoon ee waxtarkeeda sare leh waxay isticmaashaa saddex hab:
Shaandheeyaha aasaasiga ah ee boodhka, timaha iyo qaybaha waaweyn
HEPA run ah shaandhada H13 oo shaandhaysa 99,97% walxaha tirtiraya xataa bakteeriyada iyo jeermiska
Dhuxul firfircoon si loo nuugo formaldehyde, qiiqa iyo ur xun oo ay la socdaan VOCs.
Sida waxtarka leh waxaan uga hadli karnaa 400 m3 saacadiiba manka iyo isku mid ah qaybaha CADR, halka aanu leenahay dusha warqad filter ah oo fidsan oo ah 20.000 cm3. In sidan, waxay shaandhayn doontaa 99,97% qaybaha ka yar 0,3 nanometer, iyo sidoo kale inta kale ee curiyeyaasha ah ee aynu hore uga soo hadalnay.
Inkasta oo badeecaddu ay rasmi tahay, haddana ma aan awoodin in aan si gooni ah u helo shaandhada, kaas oo cimrigiisa aan sidoo kale la cayimin taasna waxaa maamuli doona Mi Home ama aaladda digniinta shaashadda, waa ceeb. Waxaan qiyaasayaa in qaybiyayaal badan oo filtarrada ahi ay iman doonaan, wakhtigan xaadirka ah ma qeexi karo midna qiimaha ama barta iibka ah ee aad ka iibsan karto, marka laga eego aragtidayda wax go'aaminaya marka la fulinayo iibsashada alaabta sifooyinkaas, iyada oo aan loo eegin inta shaandheynta ay leedahay adkaysi sare.
Waxaan wajahaynaa sifeeyaha oo farsamo ahaan iyo warqad ku bixiya sifooyin aad u wanaagsan, oo ka wanaagsan haddii ay suurtogal tahay marka loo eego kuwa ay xafiiltamaan oo isku qiimo ah oo xitaa aad u sarreeya. Waxaan haynaa 259 euro nadiifiye aad u dhamaystiran oo leh dhamaan sifooyinka uu qofku ka filan karo alaabtan oo kale. Nasiib darro, ma sii deyn karo dhibicda taban ee aanan heli karin qaybo dheeri ah oo laga heli karo meelaha iibka ah sida Qalabka PC ama Amazon, kuwaas oo tixraac u ah Spain, oo ka baxsan xaqiiqda ah in laga heli karo goobaha sida AliExpress.
Sifeeyaha Hawada Smartmi
Isku xirnaanta iyo sifooyinka
Si fudud uma helin qaybaha spare parts
Lagama heli karo mareegaha ugu muhiimsan hadda
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Sifeeyaha Hawada Smartmi, nadiifiye aad u karti badan leh filtarrada H13
Lenovo IdeaPad Flex 5 Laptop La beddeli karo oo leh € 100,99 qiimo dhimis ah